शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका पोखरेलले के गरे २ दिनमा ? | mulkhabar.com
शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका पोखरेलले के गरे २ दिनमा ?
March 17, 2018 | 10:11 pm 401 Hits
सफल मन्त्रीको चर्चा कमाउँदै मन्त्री बन्दै आएका माओवादी नेता गिरीरिाजमणी पोखरेल पुन शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्री बनेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष के पी शर्मा ओली नेतृत्वको बाम गठबन्धन सरकारमा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मन्त्री बनेका पोखरेल महोत्तरी क्षेत्र नं १ बाट प्रतिनिधि सभामा विजयी सांसद हुन् । अरु नेता भन्दा फरक जिवनशैलि अंगाल्ने अविवाहीत मन्त्री पोखरेलले पछिल्लोपटक मन्त्री बनेको २ दिनमा के के गरे त ? पत्रकार सुनिल खड्काले उनको २ दिनको दिनचर्या र गतिविधिबारे यसरी उल्लेख गरेका छन् ।
शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेलले आज कम्युनिष्ट आन्दोलनका अग्रजहरु संग भेट गरेर बधाई र शुभकामना लिनुभएको छ । मन्त्री भएपछी बधाई र शुभकामना दिन आउनेहरुको भिडलाई छिचोल्दैं आज दिनभर जस्तैं मन्त्री पोखरेलले आफ्ना अग्रज तथा पुराना बापंथी नेताहरुलाई घरैंमा पुगेर भेट गर्नुभएको छ ।
निवासमा बधाई र शुभकामना दिनेहरूको सयौं भिडका बिच पनि उहाँले आफ्ना अग्रज तथा शुभचिन्तकलाइ भेट गर्नुभएको हो । अन्य मन्त्रीहरु भन्दा धेरैं कुरामा फरक जिवनशैली भएका मन्त्री पोखरेलले हिजो सपथ ग्रहण लगत्तैं पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेर शहिद स्तम्भमा माल्यार्पण गर्नुभएको थियो । हिजो साँझ सपथ लिनुभएका शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणी पोखरेल आज बिहानैं देखी बिभिन्न भेटघाट तथा कार्यक्रममा व्यस्त हुनुभयो ।
आज बिदानको दिन परेकोले मन्त्री भएको दोस्रो दिन आज कम्युनिष्ट आन्दोलनका अगुवाहरु संग भेटघाट गर्नुभयो भने केही औंपचारिक कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभएको छ । मन्त्री पोखरेलले आज काठमाडौ मैंह्पीमा बस्नुहुने साहित्यकार पारिजातको घरमा पुगेर उहाँकी बहिनी सुकन्या वाइबालाई भेट्नुभएको छ ।
त्यस्तैं मैंह्पी नैं बस्नुहुने जन गायक रामेश/रायन श्रेष्ठको घरमा पुगेर बधाई तथा शुभकामना ग्रहण गर्नुभयो । त्यसैगरी काठमाडौ मित्र नगर बस्नुहुने बामपंथी आन्दोलनका धरोहर स्वनाम साथीलाई पनि भेट गर्नुभएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले आजै महाराजगन्ज स्थित डाक्टर महेश मास्के र चन्द्रा मास्केको परिवारलाई भेट गर्नुभयो । त्यस्तै चाबेल बस्नुहुने अग्रज बामपंथी नेता ८३ बर्षिय तिलक गुरुङलाई भेट गर्नुभयो । मन्त्री पोखरेल घोडे जात्राको अवसरमा टुडिखेलमा आयोजित घोडे जात्रा बिशेष समारोहमा पनि सरिक हुनुभयो ।
मन्त्री भएको दोस्रो दिन निवासमा आएका शुभचिन्तक हरुको बधाई लिदै मन्त्री पोखरेल वरिष्ठ साहित्यकार निनु चापागाईंको निवास पुग्नुभयो । महोत्तरी जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र १ बाट बिजयी हुनुभएका मन्त्री पोखरेल आजै महोत्तरी-काठमाडौ सम्पर्क मंचले आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा पनि सहभागी हुनुभयो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पोखरेलले शिक्षाको क्षेत्रमा २ नम्बर प्रदेश पछाडी परेको भन्दै शिक्षा र बिज्ञान प्रविधिको विकासको निम्ति आफू लागि पर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । समुदायमा आधारित भएर काम गर्नुपर्ने बताउदै पोखरेलले सबै पक्ष र क्षेत्र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।